कैलाशको कुटी: मेरी युच्छुबुङ
मिरिन यतिखेर पातलो जंगलको बीचमा दिदीको चिहान नेर घुँडा टेकेर बसेकी छे । शिर झुकाएर मौन मुद्रामा बसेकी हुँदा झलक्क हेर्दा शान्त देखिन्छे ।
अनकण्टार चिहानघारीमा आफूलाई बोलाउने को होला ? मिरिनले आँखा उघारेर हेर्छे । परिचित लाग्ने अनुहार टकटकी बाँधेर हेरिरहन्छे । उसको मनमा केही दिनअघि अस्पतालका दृश्यहरू काँचको पर्दामा जस्तै सल्बलाउँछन् । अस्पतालको शैयामा परिचित कोही नहुने । बिरामी कुरुवाबीचको अनौठो सम्बन्ध । उकुसमुकुस र मर्मभित्र लुकेको तरङ्गको बेग्लै लहर । दुःख र पीडाको समानुभूतिमा बनेको भित्री मनको नाता । उमेरले आमा सरहकी । ती महिला यहाँ कसरी आइपुगिन् होला, मिरिनलाई अन्दाज गर्न बेर लाग्दैन । शायद उनकी छोरी...। अस्पतालमा वल्लोपल्लो शैयामा रहेका दुवै मदौरु असमयमै चोला त्यागे, यहाँ चिहानघारीमा पनि आमने–सामने छिमेकीे ! मिरिन बोलिन । यथार्थ अनुभूतिमा उत्रेपछि बोल्नलाई केही बाँकी रहँदैन, सायद ।
मिरिनको मुहारमा अनौठो उदासी पोतिएको हुन्थ्यो । हर्दम । यद्यपि मैले मिरिनको मनमा कुनै कुराको चिन्ता वा फ्रिक्रीको गन्ध पाइनँ । त्यो अप्रतीम उदासी के कुराको छाप होला, मेरो कौतुहल कायमै थियो । एक दिन अरुण नदीको उत्तर–पश्चिम डाँडैडाँडा हुँदै हामी भोजपुरको च्यानडाँडा पुगेका थियौँ ।
जङ्गलमा पंक्षी, वन्यजन्तु र कीटपतङ्गको आवाज मिसिँदा गजबको रिमिक्स बजिरहेको जस्तो सुनिन्थ्यो । सङ्गीत सर्वोत्तम खुराक । नोइज भने मलाई ग्रेटेस्ट पोलुसन भन्ने लाग्छ, सहनै नसक्ने । उसलाई भने सबैथोक सहज । कुनै कुरामा सिकायत छैन । नियतिलाई आत्मसात गर्ने बानी नै परिसकेको थियो उसलाई ।
सानैदेखि चोट खेप्दै आइरहेकी मिरिन, उसको चिचिला मस्तिष्कले थुप्रै घटना–दुर्घटना व्यहोरिसकेको, पन्छाइसकेको छ । सानै छँदा आमा बितिन् । सौतेनी आमा आइन् । तुच्छ व्यवहार खेप्नुप¥यो । केही वर्षपछि बाबु पनि बिते । एउटा दिदी रहिन् – सम्पूर्ण परिवार । एक दिन अचानक, अस्पतालको शैयामा हेर्दाहेर्दै दिदीले आँखा चिम्लेपछि उसको लागि संसारमा आफ्नो भन्नु कोही रहेन । बिल्कुलै एक्ली । साढे छ अरब मानिसको दुनियामा एक्लै ! त्यतिखेर भने मिरिन अत्तालिई । आफ्नै अस्तित्वको यथार्थबोधले उसलाई पीडा हुन थाल्यो । अभर र सारोगाह्रोमा टेकोको खोजीमा मन यताउति पुग्थ्यो । तैपनि मन थाम्ने टेको कतै भेट्दैनथी । सौतेनी आमाबाट छुट्कारा पाउन घर छोडी । ६० रुपैयाँ नहुँदा झण्डै स्कूल छुटेको । कहिले खेतालो गई, कहिले कारखानामा काम गरी । कालक्रममा पीडाको मात्रा त्यो चरम विन्दुसम्म पुगेछ, ऊ एकाएक मस्तिष्कको कठघराबाट उन्मुक्त भई । आशा र निराशामा भासिँदै–निस्कँदै गर्दा आफैँमा सम्हालिने बानी बस्यो । संसार दुखैदुख छ भन्ने गहन स्मरणले बोधिचित्त उत्पन्न भएको जस्तो ।
ऊ बोलेर नथाक्ने । म सेलेक्टिभ लिसनर । उसलाई प्वाक्क रोक्छु र सोध्छु, तिमी दिदीबहिनी मिल्थ्यौ ? ‘हामी दिदीबहिनीको स्वभाव विपरीत थियो । दिदी अन्तरमुखी स्वभावकी थिइन्, म बहिरमुखी । तथापि सम्बन्ध आदिम कालका किराती दिदीबहिनी तयामा–खियामाको जस्तो थियो ।’
‘लौ, मिथ त मलाई औधी मन पर्छ, सुनाऊ ।’
‘प्राचीन कालमा तयामा र खियामा तिनका आमा बाबुको मृत्युपछि छुट्टिएर बस्न बाध्य भए । छुट्टिने बेलामा दुवैजनाले एक–एक वटा फूल रोपे । आफूले रोपेको फूल बेला बेलामा हेरचाह गर्न आउने र त्यही फूलको अवस्थाबाट एकअर्काको सन्चो बिसन्चो थाहा पाउने सल्लाह गरे । छुट्टिनैपर्ने बाध्यतामा दिदीबहिनीका आँसु झरे । तयामाको आँसुबाट रावाखोला र खियामाको आँसुबाट ताप्खोला बन्यो । त्यसपश्चात दुवैले आ–आफ्नै दुनियामा, आ–आफ्नै ढंगले जीवन बिताइरहे । अकस्मात खियामाको मृत्यु भयो । तयामा फूल रोपेको ठाउँमा पुग्दा खियामाले रोपेको फूल ओइलाएको देखेपछि विचलित हुँदै खियामाको खोजी गरिन् । खियामाका हड्डीकुड्डी भेला पारेर जडिबुटीको झोलमा डुबाइराखिन् र मुन्धुम गाउँदै तान बुन्न थालिन् । तानमा बहिनी खियामाको अनुहारको आकृति बनाउँदै गइन् । सग्लो आकृति तयार हुनासाथ खियामा पुनर्जीवित भइन् । यसरी उनीहरूको पुनर्मिलन भयो ।
दोहोर्याएर अपनत्वको न्यानो अनुभूति गरेपछि दुवै फेरि आ–आफ्नै दुनियाँमा फर्कनुुपर्नेहुन्छ । तयामा चरी बनेर हिमालमा पुगी युच्छुबुङ फूल भई फुलिन् । खियामा पनि चरी भइ मधेसतिर उडिन्, र गोबाबुङ भई फुलिन् । यद्यपि वर्षेनि दिदीबहिनीको पुनर्मिलन हुन्थ्यो । असोजको झरीसँगै युच्छुबुङ् फूलका पराग कणहरू बग्दै मधेसमा भएकी आफ्नी बहिनी गोबाबुङलाई भेट्न जान्छन् । दिदीबहिनीको मिलन हुँदा पुनः एक पटक उनीहरू एकअर्कासँग आत्मीयता र सुखदुःख साटासाट गर्दै आँसु बगाउँछन् । तिनीहरूको रोदनबाट झरी पर्छ । रावाखोला र ताप्खोलामा ठूलो भल बग्दा तिनै दिदीबहिनीको मिलन र बिछोडको सम्झना गरिन्छ ।’
मिथ सुनाइसकेर मिरिनले थपी, ‘हामी दिदीबहिनीको भावनात्मका सम्बन्ध त्यस्तै थियो, फरक यत्ति हो, मैले दिदीलाई ब्युँताउन सक्दिन ।’
‘हाम्रोे जीवनमा पनि सँगै बस्ने मौका जुरेन । न त एकअर्काको मनभित्रको कुरा साट्ने बहाना नै खोज्यौँ हामीहरूले । दुवैलाई गहिरो अनुभूति थियो, आधुनिक जीवन र दिनचर्याको धङ्धङीमा संयोगको साइत क्षणिक र वियोग नै जीवनमा शाश्वत रहन्छ । तथापि आपसमा अटुट भरोसा थियो । अनभिज्ञ नै सही, आपसमा विश्वस्त थियौँ हामी दुवै । ढुङ्गाको भर माटोलाई, माटोको भर ढुङ्गालाई भनेजस्तो । यद्यपि आसक्ति थिएन । भिन्नाभिन्नै स्थानमा फुलेका फूलजस्तै निर्लिप्त र अनासक्त थियौँ हामी दुवै ।’
उसका कुराले मलाई शिरीषको फूल सम्झना आयो । मनमनै सोचेँ, मिरिनका दिदीबहिनीमा किलर इन्सटिङ्क्ट वा डेथ इन्सटिङ्क्ट कुन चाहिँ होला ! फूल कस्तो राम्रो भने, जहाँ पनि ढकमक्क फुलिरहने । सौन्दर्य तारीफ गर्ने कवि हृदय नजिकमा भए पनि गमक्क नहुने, नभए पनि सुर्ता नगर्ने । शिरमा सिउरिइँदा या ओइलाएर माटोमा बिलीन हुँदा, कुनै आसक्ति वा बेचैनी अनुभूति नगर्ने । सदा निर्लिप्त, सुन्दर र शान्त । समय आउँदा निर्धक्क फक्रने । आफ्नो सौन्दर्य र मादकतामा सारा जगत् नै आसक्त होस्, तर स्वयं हरदम निस्पृह रहने । सायद मिरिनका दिदीबहिनी प्रकृतिको उत्कृष्ट सृजना त्यही फूलका दुई थुङ्गासदृश थिए, जसले अन्य सबैको तनमनमा आसक्ति जगाइदिन्छन् । तर आफूमा त्यो कहिल्यै लागू गर्दैनन् । फूलमा निस्छलता हुन्छ वा इन्सटिङ्क, म जान्दिन । सायद मिरिन जान्दछे कि ।
म आफैँभित्र हराइरहँदा ऊ पनि कतै छेलिइसकेकी रहिछ । टोलाइरहेका उसका आँखामा सायद दिदीकै यादहरू तरङ्गित भइरहेका थिए । मैले उसका आँखाअगाडि हातको पर्दा हाल्दै–खसाल्दै गरेपछि ऊ मनको लोकबाट इहलोकमा आई । र भन्न थालीः
‘दिदीलाई पाँच वर्षअघि स्तन क्यान्सर भएको थियोे । मेरो सपना बिग्रिएपछि दिदीको हालखबरबारे खोजतलाश गरेँ । क्यान्सरले खाइमार्नै आटेको दिदीको शरिर आधुनिक औषधिउपचारको आडमा जोगियो । शरीरमा क्यान्सर फैलिन नदिन एकपट्टिको स्तन काटेर फालेको रे, ह्वाँ कुवेतमै । नेपालमै भए मेरी दिदी त्यत्ति नै खेर मर्थिन् रे । उपचार गरेर पूरै निको भयो भनेर दिदी र म दुवै ढुक्क थियौँ । केही समयपछि दिदी फेरि लेबनान गईन् । क्यान्सर फेरि बल्झेर उपचार नहुने भएपछि लेबनानले दिदीलाई नेपाल फर्काइदियो । शरीरमा बलबूता छँदासम्म श्रमको शोषण गरियो र रोगले जीर्ण भएपछि औषधीमूलो गर्नुको साटो पोकापन्तुरा बोकाएर फर्काइयो ।’
‘मेरी दिदीको मात्र के कुरा । अस्पतालमा छोरी गुमाएकी ती महिलाको यता छोरी मरिन् । उता कमाउन मलेसिया गा’को ज्वाइँको पनि लास आइपुगेछ, बाकसमा । न छोरी मर्दा ज्वाइँले थाहा पाए, न त ज्वाइँ मर्दा छोरीले नै । दुवैको सदगत गरिछन् । बूढी भन्दै थिइन्, ‘जे हुनु भइगो, बिचल्ली देख्दा मनै थामिँदैन । टुहुरा भए नातिनीहरू ।’
हठात्, मेरो मस्तिष्कमा त्यो कहिल्यै नदेखेको ‘ज्वाइँ’ को तस्वीर आउँछ, । सोच्छु, सबै मान्छेका जस्तै लाउँला–खाउँला भन्ने कति रहर थिए होलान् ती ‘ज्वाइँ’का मनमा । कमाउनकै लागि नौँ सय डाँडा काटेर, एउटा छोरी तोते बोली बोल्न थाल्दा र अर्की आमाकै गर्भमा छाडेर मलेसिया पुगेका उनी धनदौलत बोकेर फर्कनुको सट्टा विदेशी भूमिलाई ज्यानको आहुति दिन पुगे । आजभोलि, बाहिर मर्नेहरूको लाश लिन फारम भर्ने आफन्तहरूको लर्को दिनहुँ लाग्ने गर्छ, परराष्ट्रमा । म सम्झन्छु, अघिल्लो वर्ष अरबमा मात्रै छ सयभन्दा बढी नेपाली कामदार अकालमै मरेका थिए ।
मिरिनले चिहानमाथि झरेको सुकेको पात टिप्दै भनी, ‘कस्तो निष्ठुर नियति मानिसको । परिवेश र परिस्थितिको दास । दुई मुठी सास फ्वास्स जाँदा जिन्दगी चिलिम् । बाँचुन्जेल के–के कुराको मात्र सुर्ता र फिक्री गरिरहनु ।’ दुखान्त परिघटनाहरूले मिरिनको मन नियतिको निर्दयी प्रहारप्रति कठोर बनेको हुनुपर्छ । लामो सास फेर्छे मिरिन । लाग्छ, मुटु कस्तै घटनाले पनि नहल्लाउने बनाउन सकेकोमा सन्तोषको सास लिएकी हो, सायद । उसको मुहारमा अनौठौ चमक देखापर्छ ।
एक छिन चिहानघारीमा मौनता छाउँछ । जीवनका कठोर यथार्थहरूलाई जति स्मरण गर्यो, उति कहालिलाग्दा । हामी दुवैलाई एकसाथ लाग्छ, जीवनका अँध्यारा पक्षहरूतर्फ त हेर्दै नहेर्नु नै बेस ।
‘ढिलो चाँडो एक दिन मर्नु छँदैछ सबैलाई ।’ मनमा केही सम्झेझैँ गरी मिरिन बोल्न थाल्छेः ‘त्यति चाँडै छाडेर जाली भन्ने दश मनमा एक मन पनि थिएन । दिदी मेहनती र आँटी थिई । तर उसको भित्री पीडा र शारीरिक अस्वस्थता देख्न सकिन मैले । उसको अवस्थालाई नियालेर, खोतलेर हेर्ने कोशिससम्म गरिनँ मैले । उसले पनि शरीर र स्वास्थ्यप्रति ज्यादै भरोसा गरी । हँसिलो मुहारभित्र लुकेको पीडा बुझ्नु पनि कसरी ? हामी एकआपसमा न टाढा थियौँ न त नजिक नै ? तर एक्लोपना अनुभूति हुँदैनथ्यो । हामी एकअर्काप्रति भरोसा राख्थ्यौँ, बस् । भर–अभरमा दुवैले आफ्नै ढंगले व्यवहार उतार्थ्यौ ।’
‘मर्नेबेला दिदीले बोलेको ‘मिरिन राम्ररी बस है’ अहिल्यै हो कि जस्तो लाग्छ ।’ बोल्दाबोल्दै आँखामा रसाएका दुई थोपा आँसु मुन्टो घोप्टो पारेर गालामा नछुवाईकन तरक्क भुईमा झार्छे । मनमनै सोच्छे, केही दिनको यात्रामा गएझैँ दिदी मरेर गई । अरू बेला त केही भनिनन् नै । जिन्दगीको अन्तिम क्षणमा पनि भन्नु केही थिएन । आसक्ति छँदैथिएन ।
‘बाँचुन्जेल खाई–नखाई, मन बाँधेर, सकी–नसकी दुःख गरेको के काम लाग्यो ? एकपल्ट पनि दिल खोलेर नरमाइकन जीवन सकिन्छ भने किन दुःखी हुने ?’ झलक्क स्मृतिमा चेखबको कुनै कथाका हरफहरू आउँछन्ः मानव मस्तिष्कको चेतना वा प्रतिभा नै किन चाहियो र यदि यी सब कुराहरू अन्त्यमा गएर माटोमा मिसिन्छन् भने ? किन चाहियो ?, करोडौँ बर्षसम्म पृथ्वीसँगै सूर्यको वरिपरि फन्फनी घुमिरहनको लागि ? यस्तो झण्डै दैवी मस्तिष्क किन पाउनु, यदि पछि गएर कुनै निष्ठूर उपहास जस्तो माटोमा मिल्न जानु छ भने ? यदि मृत्यु प्रत्येक व्यक्तिको लागि स्वाभाविक र न्यायोचित अन्त्य हो भने केलाई मान्छेहरूलाई मृत्युबाट बचाइरहनुप¥यो र ? यदि कुनै व्यापारी, कर्मचारी पाँचदश वर्ष बढी बाँच्छ भने फरक नै के पर्न जान्छ र ?’ उता मिरिन आफ्नै सूरमा जीवनको महत्ता केलाउँछेः निस्सार छ जीवन, हामी सबै एक दिन मर्छौं । त्यसपछि, शून्य छ, महाशून्य ।
मिरिनले निस्सारताको फिलोसफी बखान्न थालेपछि म झन् भावविभोर हुन्छु । आमाबाबुको आनन्दबाट जन्म्यौँ, कीराहरूको आनन्दमा हामी मर्छौं, तब जीवनमा गम्भीर हुनु, के को लागि ? पढेर पनि परेर पनि आफूमा एक अनमोल निर्लिप्तता विकसित गरिसकेकी मिरिन जीवनमा कुनै अप्राप्य वस्तुको आशामा झुण्डिइन, जीवनले दिनेभन्दा ज्यादा लुछ्ने धृष्टता पनि गरिन र कहिल्यै कुनै भवितव्यप्रति सिकायत सम्म गरिन । भन्छे, ‘आखिर दिदीले के कमाई त जीवनमा ? न दिल खोलेर कहिले हाँसेकी थिई, न मनले मागेजति रमाइलो नै गरेकी थिई । थुप्रै अभिभावक भनाउँदाहरूको घेराबाट निस्केर आफ्नै छुट्टै स्वतन्त्र जिन्दगी जिउने आकाङ्क्षा र आर्थिक आत्मनिर्भरताको लागि लड्दा–लड्दै जीवन समाप्त भयो ।’
निहुरँदा तल झरेको कपालको लट माथि सम्याउँदै मिरिन मतिर फर्कन्छे र भन्छे, ‘परिवार भन्नु म एक्लो छु अब ।’
उठेर टोलाउन थाल्छे मिरिन । पतझड रुख नियाल्छे र भन्छे ः छिटै यी उजाडिएका रुखहरू हराभरा हुनेछन्, अनि फेरि नयाँ पालुवा पलाउनेछन् । दिदीको चिहानमा आफ्ना निर्लिप्त आँखा अड्याएर विस्तारै भन्छे, ‘मलाई रत्तिभर थाहा छैन म बाँचेको दुनियाँबाहेक अरु दुनियाँ छ कि छैन । विश्वासले जन्माएको अज्ञात दुनियाँ त होला नि हगि ? तिमी तिम्रै दुनियाको भोगचलनमा रमाउँदैछौ सायद, मेरी युच्छुबुङ । म पनि मेरै दुनियाँमा ...’
Posted by कैलाश at 11:59 AM
Bj Bidrohee Rai said...
बैनी निशब्द छु! बाँकी तपाईको फोन नम्बर ईनबक्स गर्नुहोला मेरो।मोबाईल।चोरीसँगै तपाईको नम्बर पनि हराएको छ।
कथाजस्तै कथा (7)
पहिलो स्वाद - 'काजुओ इशिगुरो'को